I-Las Cabañas Magicas #3 - San Agngerillo - Oaxaca - I-Airbnb
I-Las Cabañas Magicas #3 - San Agngerillo - Oaxaca
Playa San Agustinillo, Oaxaca, i-Mexico
Ikamelo e-i-guesthouse ibungazwe ngu-Pauline
Ikamelo yikamelo elithokomele elingena ilanga ezingeni eliphansi le-Cabaña elinendawo yokungena ehlukile. Uhamba imizuzu engu-2 kuphela ukuya ebhishi elicwebile lase-San Agust Atlanlo, ikamelo linemibhede emibili elala abantu ababili, indlu yokugezela yangasese eneshawa, isiqandisi, futhi ihlotshiswe kahle. Umshini wekhofi, iketela, i-toaster oven, izitsha/izinto zokudlela njll. ziyatholakala ekamelweni. Kukhona i-patio enkulu yamatshe ene-, ama-hammock nezihlalo ezinethezekile. Endlini sinengadi/igceke lomphakathi lokuphumula nokuzola.
Lona umndeni ongumnikazi futhi osebenza endaweni. Sinezingqikithi ezingu-3 ze-Cabañas. Siphila esayithini futhi sinobungane kakhulu futhi siyatholakala ngemibuzo nezicelo ezikhethekile cishe ngaso sonke isikhathi. Siyabuhlonipha ubumfihlo bezivakashi kodwa sivame ukuba sobusuku obuningi uma ungathanda ukuba nokuxhumana nokuxoxa. Uma udinga noma yimiphi imininingwane mayelana nokuhambahamba noma imisebenzi yezokuvakasha sijabule kakhulu ukuyamukela.
4.87 · 104 okushiwo abanye
engumakhelwane i-San Agustgustgustgustgustlo isesifundeni sase-Oaxaca, ogwini lwe-pacific lwase-Mexico. Leli dolobhana elilodwa lomgwaqo liyindawo ekahle kakhulu yokuhamba ukusuka emjaheni wamagundane futhi uphumule ebhishi, ukubhukuda, ukutshuza noma ukungenzi lutho. Idolobha linikeza izinhlobo ezinhle zezitolo zokudlela zamazwe ngamazwe nama-cantinas endawo ogwini.